မောင်းနှင်နေစဉ်တွင်ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းဘယ်လိုလုံခြုံအောင်နေမလဲ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > မောင်းနှင်နေစဉ်တွင်ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းဘယ်လိုလုံခြုံအောင်နေမလဲ
ဆောင်းရာသီ crackling မီးလောင်မှုတည်ဆောက်ရန်စုံလင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်, လုံခြုံစွာတောင်စောင်း hit, snowmen တည်ဆောက်ရန်နှင့်လက်ဖက်ရည်တစ်ကောင်းတဲ့ခွက်ကိုအတူတက် snuggle. ကံမကောင်းသဖြင့်, ကအားလုံးကိုမဟုတ်ဘူး ပျော်စရာနှင့်ဂိမ်းများ. ဆောင်းရာသီလည်းအများဆုံးသစ္စာပျက်သောလမ်းအချို့ကိုဖန်တီးပေး အခြေအနေများ. သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများစုကသည်အထိ hibernate ရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်မယ့် နွေဦး, ဒီမှာပါ သိကောင်းစရာများ ဆောငျးရာသီကာလအတွင်းကားမောင်းနေစဉ်သင်လုံခြုံနေဖို့ဘယ်လိုလိုအပ်ပါတယ်.
ငါတို့သည်သင်တို့ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းကားမောင်းနေစဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့ဘယ်လိုပေါ်အကြံပေးချက်များပေးခြင်းအလွန်အမင်းသတိထားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားပါ? အဆိုအရ AAA, ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်းများ, ရာသီဥတုဆိုးရွား, နှင့်မသေချာသောလမ်းအခြေအနေထက်ဝက်နီးပါးတစ်ဦးသန်းပျက်ကျခြင်းနှင့်ထက်ပိုပြီးအတွက်အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ် 2,000 လမ်းသေဆုံးမှုတိုင်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ.
သင့်ရဲ့ကားခရီးသွားများအတွက်အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ကုန် Up ကိုထုပ်ပိုး
တခါတလေ, အဆိုပါကာလအတွင်းကားမောင်းနေစဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့ရန်သင့်ရည်ရွယ်ချက် ဆောငျးရာသီ မလုံလောကျ. ကျနော်တို့ဆောင်ပုဒ်ဖြင့်အသက်ရှင်လို, အကောင်းဆုံးကိုများအတွက် '' မျှော်လင့်ချက်, '' အဆိုးရွားဆုံးအတှကျပွငျဆငျ. သင့်ကားဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူ outfitted အရေးပေါ်၏အမှု၌. တစ်ပူနွေးစောင် Include, ပူနွေးသောအဝတ်ကို, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအကူအညီကိရိယာအစုံ, တစ်ဦးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးသို့မဟုတ်မီးတောက်, Jumper ကေဘယ်လ်ကြိုး, ရေခဲခြစ်, ဂေါ်ပြား, သငျသညျဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲပေးရသဲသို့မဟုတ် kitty အမှိုက်သရိုက်များ, နှင့် မိုးပွင့် သံကြိုး. သင်တို့သည်လည်းအချို့သောရေသယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်, အစားအစာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများစွမ်းအင်အရက်ဆိုင်သို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းရောနှော-နှင့်ဖုန်းကိုအားသွင်း -like!
ယာဉ်မောင်းနေစဉ်သင့် Mirrors ကတော့ရန် Stay ကို Safe အပေါ်ရေခဲပြင်စစ်ဆေးသည်
ဤသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလမောင်းနှင်မှုအစွန်အဖျားဖြစ်ပြီး ခရီးတာ လမ်းအခြေအနေရေခဲလျှင်ယာဉ်မောင်းဆုံးဖြတ်ရန်သုံးပါ. သင့်ရဲ့ပြင်ပမှာမှန်စစ်ဆေးခြင်း. ရေခဲမှန်ပေါ်ဖွဲ့စည်းရန်စတင်လျှင်, ကြောင်းရေခဲလည်းလမျးပျေါမှာဖွဲ့စည်းကြောင်းအကောင်းတစ်ဦးညွှန်ပြချက်င်. ကမောင်းမှတက်ပူနွေးလာသည်သည်အထိကားမောင်းနေစဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့အပိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုယူသို့မဟုတ်စောင့်ဆိုင်း.
Drive ကိုကို Safe နဲ့အရွက်အစောပိုင်း!
ဒါကတစ်ခုသိသာတဦးတည်းတူသောထင်, ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်သင်တို့သင်၏နောက် destination သို့ရဖို့အလုပ်များနှင့်စိတ်အားထက်သန်နေကိုသိရ. ကျနော်တို့နှေးကွေးယူရန်သင့်အားသတိပေးဒီနေရာကိုရောက်နေ! ပေါ်မှာငါတို့အဓိကအကြံပေးချက်များတစ်ခုမှာ ကားမောင်းနေစဉ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွင်းမှာလုံခြုံနေဖို့ဘယ်လို အပိုအချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်ခွင့်ပြု သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာ. ခရီးများထွက်ခြင်း ယခုနှစ်သည်အခြားကြိမ်ထက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွင်းမှာကြာကြာယူနိုင်ပါသည်, သငျသညျမုန်တိုင်းအခြေအနေများသို့မဟုတ်ရေခဲလမ်းများကြုံတွေ့ရအထူးသဖြင့်လျှင်. ထိုအ inclement ရာသီဥတုကားမောင်းနှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ခြင်း၏ဆက်ပြောသည်ဖိအားမပါဘဲအလုံအလောက်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါသည်, မူသောသင်တို့လုံခြုံမောင်းနှင်မှုတရားသဖြင့်စီရင်သောမိုဃ်းတိမ်စေခြင်းငှါ,.
Nuremberg ရထားမှ Bremen
Leipzig Nuremberg မှရထား
Nuremberg ရထားမှ Hanover
ဟမ်းဘတ် Nuremberg မှရထား
ကို Safe မောင်းနှင့်အာရုံ Minimize
ကားမောင်းနေစဉ်ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းလုံခြုံနေဖို့ဘယ်လို #1 အဖျား: သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချ! ပိတ်ထားသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါ သို့မဟုတ်သင့်ကားရဲ့ချိတ်ဆက်ထားသောဘလူးတုသ်-နှင့်ဘယ်တော့မှကြောင်း WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုစစျဆေးဖို့လမ်းပိတ်ဘီးသို့မဟုတ်မျက်စိပိတ်ထားသင့်လက်ကိုယူ.
ယာဉ်မောင်းနည်းလမ်လမ်းကိုနားထောင်နေစဉ်ကို Safe နေဖို့!
အဘယ်သူမျှမ, သင်၏နှလုံးစကားကိုနားမထောင်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဒီအချိန်. လမ်းကိုနားထောင်. တိုက်ရိုက်. ဆီးနှင်းနှင့်ရေခဲပေါ်မှာကားမောင်းတဲ့အခါမှာတာယာကွဲပြားခြားနားသောအသံများကိုပါစေ, ဆောငျးရာသီမောင်းနှင်မှုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဘို့သင့်ရေဒီယိုအသံအတိုးအကျယ်ကိုချထားရန်အခြားအကြောင်းပြချက်အရာဖြစ်ပါသည်. နှင်းကျထကန်ကြောင့်နှင်းဖုံးလမ်းဆူညံသံအတော်လေးကျယ်လောင်ဖြစ်သင့်. အသံကျယ်ဆူညံသံရုတ်တရက်ရပ်လိုက်လိုလျှင်, သငျသညျရေခဲမှဆီးနှင်းထံမှပြောင်းရွှေ့ကြစေခြင်းငှါ,. နေဖို့ပုဖို့အတွက်ညှိ အသံက မကြာခဏလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းလမ်းအခြေအနေ၏ထိပ်ပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ဖို့လမ်းပေါ်တွင်သင်၏တာယာ၏, အထူးသဖြင့်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်တစ်မုန်တိုင်းပြီးနောက်ညာဘက်.
မောင်းနှင်နေစဉ်တွင်ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းကို Safe နေပါဖို့ကိုဘယ်လို? သင့်ရဲ့ Wiper အရည် Anti-အေးခဲပါရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ, ဒါကြောင့်ရေမှုန်ရေမွှားအေးလွန်းတဲ့ရာသီဥတုထဲမှာအေးခဲပါဘူး. ဆောငျးရာသီ Wiper ဓါးသွားဝယ်ယူစဉ်းစားကြည့်ပါ, သော Wiper အပေါ် hardening ကနေရေခဲနှင့်ဆီးနှင်းတားဆီး!
တခါတလေ, ဤအမှုအရာတို့ကိုရှောင်ရှားရမည်မရှိမဖြစ်. သငျသညျမိုဃ်းပွင့်အတွက်ဖမ်းရခဲ့လျှင်ဤနေရာတွင်အချို့သောမြန်ဆန်အကြံပေးချက်များများမှာ:
သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်နှင့်နေ: သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်ယာယီအမိုးအကာထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်လွယ်ကူကယ်ဆယ်ရေးသင်နေရာချထားရန်စေသည်. ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်ဖို့မကြိုးစားပါ. ဆီးနှင်းမှုတ်၌သင်တို့၏မော်တော်ယာဉ်၏ရှေ့တော်၌ဆုံးရှုံးပျောက်ဆုံးဖြစ်လာရန်လွယ်ကူသောကြောင့်.
ကိုယ့်ကိုကိုယ် overexert မနေပါနဲ့: သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်ထုတ်တူးလိုက်တဲ့အခါ, သင်ပင်ပန်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နားထောင်ရန်နှင့်ရပ်တန့်.
မြင်နိုင် Be: သင်၏မော်တော်ယာဉ်အင်တင်နာနှင့်တောက်ပသောအရောင်ခြယ်ထားသောအဝတ်ကိုချည် ထား၍ သို့မဟုတ်ပြdistနာကိုအချက်ပြရန်အတွက်လှိမ့် ၀ င်းဒိုး၏ထိပ်တွင်အထည်တစ်ခုထားပါ။. ညမှာ, ဖြစ်နိုင်လျှင်အပေါ်အမိုးခုံးအလင်းကိုစောင့်ရှောက်. ကိုယ်ကသာလျှပ်စစ်မီး၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုအသုံးပြုသည်နှင့်လွယ်ကူကယ်ဆယ်ရေးသင်ရှာရန်အဘို့အစေမည်.
အဆိုပါအိပ်ဇောပိုက်ရှင်းလင်း: အဆိုပါအိပ်ဇောပိုက်ဆီးနှင်းနှင့်အတူပိတျဆို့နတေဲ့သည်မဟုတ်သေချာအောင်လုပ်ပါ, ရေခဲ, သို့မဟုတ်ရွှံ့. တစ်ဦးကပိတ်ဆို့အိပ်ဇောပိုက်အင်ဂျင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်ယာဉ်များ၏ခရီးသည်အခန်းသို့ပေါက်ကြားဖို့သေစေနိုင်သောကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဓါတ်ငွေ့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်.
ပူနွေးနေပါ: အေးမှသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သီးခြားထားပေးရန်ရရှိနိုင်ပါသည်ဘာပဲအသုံးပြုမှု. ဒါကကြမ်းပြင်ဖျာတို့ပါဝင်သည်နိုင်, သတင်းစာများ, သို့မဟုတ်စက္ကူမြေပုံများ. pre-pack ကို အရေးပေါ်၏အမှု၌အသုံးပြုရန်အတွက်စောင်များနှင့်မိုးသည်းထန်စွာအဝတ်အစား.
လောင်စာဆီထိန်းသိမ်းရန်: ဖြစ်နိုင်လျှင်, အဆိုပါ Chilling ဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှည်လျားလုံလောက်စွာအင်ဂျင်နဲ့အပူပေးစက်သာ run. ဤသည်လောင်စာဆီထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးပါမည်.
ကားမောင်းနေစဉ်သင်နေဘေးကင်းလုံခြုံအပေါငျးတို့သအထက်တွင်လုပ်ရတဲ့ရှောင်ရှားနိုင်မယ့်လမ်းကဘာလဲရှိခဲ့ပါလျှင်? သာသင်ပေါ်သို့ခုန်နိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ် mode ကိုရှိခဲ့သည်ဆိုပါက, လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရနှင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာခရီးသွား. အိုးနပေါဦး, ရှိသည်! ဒါဟာရထားကိုခေါ်မယ့်!
အနည်းငယ်ကအခြားကြောင်းကားများလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပူဇော်မှန်ဒါဟာင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် Modes ပြုပါ. သငျသညျမဟုတ်ရင်လက်လှမ်းမမှီပါတလျှောက်သွားလာနိုင်ပါတယ် ကမ်းရိုးတန်းလမ်းများ, ဝေးလံခေါင်ဖျားကျေးရွာများသို့ခေါင်းကို, ထွက်ရောင်းအချိန်ဇယားသို့မဟုတ်ထိုင်ခုံအကြောင်းကိုမစိုးရိမ်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ချို့ယွင်းချက်မရှိဘဲမဟုတ်ပါဘူး, သို့သော်. အထက်ပါမြောက်မြားစွာအကြောင်းရင်းများကိုကြည့်ပါ!
ရထားဘေးကင်းခြင်းနှင့်ပိုမြန်များမှာ! ကားမောင်းနေစဉ်သင်ခရီးသွားလေ့ကငျြ့လျှင်ဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့ဒါမလိုအပ်, ထို့အပြင်ရထားပိုပြီးတတ်နိုင်များမှာ, သင်အသုံးပြုနေသောအထူးသဖြင့်လျှင် တစ်ဦးကရထား Save သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်. ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချလိုအပ်ပါတယ်? ကျနော်တို့ကရေးသားခဲ့သည်တစ်ဦးတပြင်လုံးကိုဘလော့ဂ်ပေါ် အဘယ်ကြောင့်ရထားခရီးကိုမှသာလွန်သည်ကားလမ်းခရီးသွားလာ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsafe-driving-during-winter%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)